ओलीलाई राष्ट्रको सपूतको संज्ञा दिंदै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने: बिरालोको घाँटीमा घन्टी झुन्ड्याए -
पोखरा। प्रदेशलाई कम अधिकार दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निसंकोच आलोचना गर्दै आएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाली सीमा रक्षाका सन्दर्भमा भने ओलीको प्रशंसा गरेका छन्। सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति सदस्य र प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका उनले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रको सपूतको संज्ञा दिए।
प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशनको सुरु दिन आइतबार मन्तव्यका क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले भारतसँग ओलीले पौठेजोरी खेल्ने आँट गरेको बताए। ‘हिजोदेखि भारतले मिचमाच गर्‍यो, कसैले बोल्ने हिम्मत गरेन, सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्माज्यूले लिम्पियासम्मको भूमि हाम्रो हो भनेर हिम्मत गर्नुभाछ,’ उनले भने, ‘कूटनीति लडाइँ सुरु भयो अब। सत्य कुरा के हो भने इतिहासको यो जटिल जङ्सनमा उहाँले एउटा आँट गर्नुभयो।’
नेपालमा ३८/४० जना प्रधानमन्त्री भए पनि अहिलेसम्म अरुले गर्न नसकेको काम केपी ओलीबाट भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो। ‘मुख्तियार भीमसेन थापापछि नेपालमा कति प्रधानमन्त्री भए ? गन्नोस् त ३८ जना भयो कि ४० जना भयो ? पञ्चायतको छाड्दिऊँ, मनमोहन अधिकारी एकपटक हुनुभयो। माधव नेपाल कतिपटक हुनुभयो, गिरिजाप्रसाद कतिपटक हुनुभयो, शेरबहादुर देउवा कतिपटक हुनुभयो, बाबुराम भट्टराई कतिपटक हुनुभयो, प्रचण्ड कतिपटक हुनुभयो ? हिसाब किताब छ नि हामीसँग तर बिरोलोको घाँटीमा घन्टी झुन्ड्याउने त सम्मानीय केपी शर्मा ओली नै हो नि, कसैले लुकाएर लुकाउन मिल्छ र ?’ उनले भने, ‘यो हिसाबले केपी ओली नेपालको एउटा सपूत हो। मेरो पार्टीको अध्यक्ष भएर भन्या हैन, प्रधानमन्त्री भएर पनि भन्या हैन।’
मुख्यमन्त्रीले दुई देशको समान सार्वभौमिकताको आधारमा केपी ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको हुँदा उनको कदमलाई परराष्ट्र नीतिका निम्ति ओली डक्ट्रिनको संज्ञा दिए। ‘यो त त्यही फुच्चे भुटानलाई पनि काम लाग्ने डक्ट्रिन, माल्दिभ्सलाई पनि काम लाग्ने डक्ट्रिन, बंगलादेशलाई पनि काम लाग्ने डक्ट्रिन,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री गुरुङले राजा महेन्द्र र राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको समेत प्रशंसा गरे। राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले २०२६ सालमा नेपालको उत्तरी सीमाबाट भारतीय सेनाको क्याम्प हटाएको प्रशंग ल्याउँदै उनीहरुको प्रशंसा मुख्यमन्त्रीले गरेका हुन्। राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता ल्याउनुका साथै सीमामा पिल्लर गाडेको हुँदा इतिहासले सम्झेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो। ‘४ जिल्ला फिर्ता गराउने राष्ट्रवादी कि आजका हामी नाराका राष्ट्रवादी ?’ उनले भने, ‘व्यवहारिक रुपमा जंगबहादुर राष्ट्रवादी। अंग्रेजको दलाल थिए उनी, त्यति हुँदा पनि त्यति काम त गरेछ न उनले।’
गण्डकी प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको पहिलो दिन मुख्यमन्त्रीको मन्तव्यसँगै आइबारको बैठक अन्त्य भयो। आइतबारकै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कोरोना रोग रोकथाममा सन्तोषजनक काम हुन नसकेको बताए। प्रत्येक जिल्लामा कोरोना उपचारका अस्पतालको खाँचो उनले औंल्याए। ‘महामारी विरुद्ध लड्न पूर्व तयारी, लकडाउनको बेलाको राहत, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, कोभिड हस्पिटल स्वास्थ्य तथा सुरक्षा लगायत, अग्रपंक्तिमा खटेर काम गर्नेका लागि सुरक्षा सामग्री, परीक्षण सामग्री आपूर्तिका कामहरु उचित तरिकाबाट जति हुनुपर्ने थियो, त्यति भएका छैनन्’, उनले भने।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका सांसद कृष्ण थापाले प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। जनता समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्य हरिशरण आचार्यले कोरोनाका महामारी नियन्त्रणका लागि ३ तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव खड्किएको बताए।
नदीपुर पोखरास्थित प्रदेश सभा भवन साँघुरो भएका कारण सामाजिक दुरी कायम गर्न सभागृहमा प्रदेश सभा बसेको थियो। यो अधिवेशन पूरै सभागृहमै बस्ने भएको छ।